Hery - Tsiky dia ampy | Oktobra 2009
Google Chrome indray no malaza
2009-10-29 @ 09:59 in Izaho sy ny ahy
Andro maromaro izay no nampiasako Google Chrome, izay fitaovana efa navoakan'i Google efa elaela ihany izay, hijerena ny takelaka amin'ny internet. Ka mba hitondra teny kely momba ity "navigateur" ity aho. Ny tombony sy ny maharatsy azy.
Ny tombony lehibe amin'ny fampiasana Google Chrome dia noho ny hafainganany. Vetivety dia misokatra ny takelaka, ary izy koa vetivety dia voasokatra. Anisan'ny antony mampalaky be azy aloha dia azo lazaina hoe tsotra be izy. Tsy dia be filirony loatra. Nefa koa ny rindra anatiny dia tsy mitovy amin'ny fanaon'ny hafa tahaka ny Firefox ohatra. Ny an'ny Google Chrome, ohatra, isaky ny "Tab" (onglets) tsirairay dia manokatra "process" iray izy, izany hoe mibahana memoires roa samihafa ary rehefa mihidy iny dia tapitra koa ilay "process". Ny an'ny Firefox mantsy dia process iray ihany no miasa amin'ny fenetre iray na firy na firy ny "tabs" misokatra. Misy fotoana mahatratra hatramin'ny 500MB mihitsy ny memoire lanin'ny Firefox fotsiny. Dia manjary miadana be ny ordinatera.
Ny maharatsy ny Google Chrome indray dia noho ilay izy tsotra loatra. Betsaka ny zavatra tsy tonga dia mandeha ara-dalàna. Ohatra fotsiny hoe manoratra an'ity lahatsoratra ity aho dia tsy afaka mi-selectionner an'io sary eto ambany io mba hanakelezana na hanalehibeazana azy. Ankoatra an'izay dia tsy mbola afaka mampiditra fanampiny hafa (add-ons) tahaka ny Firefox ka tsy maintsy miverina mampiasa Firefox ihany rehefa mila zavatra manokana.
Andramo alaina eto ny Google Chrome fa sao dia mety mahaliana anao.